Avy amin’ny tontolon’ny bilaogy Jordaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2018 14:52 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamihn'ny volana Septambra 2005)
Momba ny raharaha iraisampirenena:
Ao amin'ny bilaogin'ny Jordaniana, mbola re ny resaka momba an'i Katarina (rivodoza). Jameed manonona fomba fijery iray manolo-kevitra fa ny fifantohana amin'ny fandrobana ataon'ny “andian-jiolahy mahery setra” dia” fomba iray “hanodinana ny saina amin'ny faharavàn'ny fotodrafitrasa tanteraka sy ny ezaka fanavotana tsy tompon'andraikitra“. Nanamarika ihany koa izy fa misy fiantraikany amin'ny Etazonia manontolo ny takaitra navelan'i Katarina, “Ny marika voalohany dia sambany nameno lasantsy maherin'ny 20 dolara ny fiarako tamin'ny herinandro lasa.” Sha3teely, etsy ankilany, mampitaha ny fanehoan-kevitra momba an'i Katarina amin'ny fanehoan-kevitra hafa manoloana ireo loza iraisam-pirenena hafa. Sabbah koa manamafy ny zava-misy fa nanome vola maherin'ny 3 tapitrisa dolara ho an'ireo niharam-pahavoazana tamin'ny Katrina ny Arabo, avy eo izy nanamarika fa “nanome rindrina ho an'ny Isiraeliana ny governemanta Amerikana, raha todra-drano kosa i Nouvelle-Orléans! ” ary i Linda Haddad nilaza fa, “misy ny mizana tsindrian'ila ao amin'ny fampahalalam-baovao amerikana.”
Amin'ny hetsika ara-kolotsaina eo an-toerana
Maro ny zava-mitranga ao an-toerana. SC ao amin'ny Utopia mitatitra fa nijanona tany Amman tamin'ny 9 septambra ilay mpihira Amerikana tia fivoarana, David Rovics mb hanao fampisehoana iray alohan'ny hidirany amin'ny fitsidihany voalohany hanao fampisehoana any Palestina. Roba avy amin'ny “And Far Away” namoaka lahatsoratra momba ny “Fankalazana ankehitriny an'ny ôrikesitra fivavahana am-piangonana”, sy ny fampisehoana faha-telo amin'ny Dokambarotra maha-Adala (Mad Show Advertising). Ahmad Humeid indray mitatitra avy ao amin'ny seho lokam-pifaninanana dokambarotra Jordania 2005 ary milaza fa “mampiakatra ny isa amin'ny dokambarotra Jordaniana amin'ny ankapobeny ny fitomboan-danjan'ny dokambarotra, sy ny fisosososoana mankany amin'ny famoronana, ny fahamendrehana sy ny hatsikana”.
Lina nizara ny zavatra hitany fa mahaliana nandritra ny fitsidihany bilaogy sy gazety, ary mitondra antsika any amin'ny bilaogy hitany vao haingana – ” “Schiavoni dia Amerikana mpila ravinahitra mipetraka any Jordania efa ho 6 volana izao, miasa ho talen'ny fanangonam-bola ao amin'ny iJordan.” Yazan Malakha miresaka sarimihetsika fohy avy amin'ny Creative Community momba ny sarimihetsika piraty. Palforce kosa, mandritra izany fotoana izany, manome rohy mankany amin'ny sarimihetsika antsoina hoe “The Syrian Bride” nosoratan'i Eran Riklis, izay miresaka momba ny zava-misy isan'andro tsy maintsy atrehin'ny Arabo eo ambany fibodoana Israeliana.
Ahmad Humeid manontany tena raha ho faly amin'ny fitetezana elektronika ny tanàna i Amman atsy ho atsy. Ary i Isam Bayazidi kosa te-ahafantatra raha hanohana ny teknolojia Loharano Misokatra na tsia i Jordania. Natasha manondro ny zaikaben'ny “Tanora Miozolomana sy Kristiana ary ny Olana amin'ny Fiaraha-miaina” ary milaza fa mampihetsi-po izany. Haitham Sabbah miresaka zava-mitranga manahirana kokoa – Ireo niharam-boina farany tamin'ny klioban'ny mpivaro-tena ao amin'ny Saikinosy Arabo, Yemen !!
Eman avy amin'ny AquaCool miverina miaraka amin'ny fizarana faha-26 mampihomehy amin'ny Diarin'ny Asany, ary Ziad ao amin'ny First Home namoaka ny fidirana voalohany “manokana”.